China Natural eco engenanto umqhaphu ngelaphu tote mini ibhegi blue ngelaphu lokuthenga nge logo yoMvelisi kunye noMthengisi | Zhihongda
Natural eco engenanto umqhaphu ngelaphu tote mini ibhegi blue ngelaphu lokuthenga nge logo
1.Umbala: nawuphi na umbala ongawukhetha, i-12 Oz Canvas Bag, ubungakanani njengombuzo wabathengi, kunye nobukhulu obuqhelekileyo.
2. I-100% yesiQinisekiso sokuHanjiswa ngokukhawuleza kunye neNkonzo yoMthengi elungileyo.
GCINA INDalo: Iplastikhi kunye nephepha lokuthenga iphepha alilunganga kwimeko-bume, kuthintele ukumosha iphepha kunye nengxowa yeplastiki, olona khetho luluqilima yingxowa yethu eqinileyo kunye ne-eco-friendly enokuphinda isebenze yomqhaphu.
UMSEBENZI 3.HEAVY & DURABLE: ibhegi tote yi-ounces ezili-12 ngelaphu, ngqo isitishi heavyweight lonke, Ezi ngxowa kuqiniswa kwindawo yoxinzelelo, oko ukumelana neekhilogram ezingama-30 ubunzima.
4. Ayingenanto yeProjekthi ye-DIY: ecocekileyo nelula ibhegi yoyilo engenanto ikuvumela wena nabantwana bakho ukuba nizenzele owabo umzobo kunye nokuzoba, nizenzele iibhegi ezizizo.
INJONGO ye-MULTI: Ukusetyenziswa okungafaniyo kwale bhegi yempahla ayisiyiyo kuphela ibhegi yokuthenga ezivenkileni kodwa inokuba yingxowa yokuthwala yesikolo, ibhegi yaselwandle, ibhegi yokuthambisa, ibhegi yeyoga, njl.
Igama lomxholo Natural eco engenanto umqhaphu ngelaphu tote mini ibhegi blue ngelaphu lokuthenga nge logo
Egqithileyo I-Plain Reusable cotton Grocery Shopping Bag i-eco-friendly Iingxowa zendalo zendalo
Okulandelayo: Intengiso ye-eco-friendly yentengiso ye-canvas tote bag ene logo eprintiweyo
Iphinda isebenze i-12oz yokuthenga ingxowa ye-DIY yeCraf ...
Zenziwe ngephepha Case izithambiso Canvas Custom yakutya Sc ...
Iziqhamo zemifuno yeCotton Mesh String Bag